(L) Oxytocin နှင့် Dopamine လွှမ်းမိုးသောကြွက်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှု - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
ဧပြီလ 23, 2015 | ယောရှု L ကို Davis ကအားဖြင့်
လိင်တူဆက်ဆံအပြုအမူများအတွက်အခြေခံမကြာခဏ-နှင့်ရှိပြီးမကြာခဏအကြိတ်အနယ်-ခဲ့အခြေအတင်ဆွေးနွေး။ ဒါကြောင့်သဘာဝရှိပါသလား? ပြုစုပျိုးထောင်? နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်? သုတေသီများ မှ တက္ကသိုလ် Veracruzanaမက္ကစီကို၊ သူတို့၏ ဦး ထုပ်ကိုလက်စွပ်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်ကြသည်။ သူတို့ကကြွက်များတွင်အမျိုးသားများလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်မှာ oxytocin နှင့် psychoactive drug quinpirole တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး quinpirole သည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် neurotransmitter dopamine နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုလူသိများသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည်။ အပြုအမူတွင် ဦး နှောက်သည် dopamine ပမာဏများစွာကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်ကြွက်အားကြွက်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီး၊ ၎င်းသည်သန္ဓေတည်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်မိခင်၏ ဦး နှောက်အား oxytocin ဟော်မုန်းများကျရောက်စေသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်မှု၊ ဆုလာဘ်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတွယ်တာမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုမူရန်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
လိင်နုံအထီးကြွက်ဟော်မုန်း oxytocin နှင့် / သို့မဟုတ် quinpirole ဖြစ်စေထိတွေ့, ပြီးတော့ထားကြသောအခါ တွဲပြီး သည်အခြားလိင်တက်ကြွအထီးနှင့်အတူ, သူတို့ကမူးယစ်ဆေးသူတို့ရဲ့စနစ်မရှိတော့ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်လျှင်ပင်, အခြားယောက်ျားတစ်လူမှုရေး preference ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကြောင်းလူမှုရေးအခြေအနေပဲကန့်သတ်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ အထီးနှင့်တစ်ဦးလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးအကြားရွေးချယ်မှုရက်အကြာတွင်ပေးသောအခါ, ကုသကြွက်မအမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ကိစ္စဦးစားပေးပြသပေမယ့်ထပ်အထီးအဘို့။
တစ်ဦးကြွက်လူမှုရေးအရလျှင်ဒီတော့ဘယ်လောက်သင်ပြောပြကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်လိင်, တူညီတဲ့လိင်၏အခြားကြွက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့? ကောင်းပြီ, သုတေသီတို့သည်ကုသကြွက်သူတို့ရှိခဲ့အခြားယောက်ျား, ဘယ်လောက်ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း, ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသူတို့လိင်အင်္ဂါကဲ့ရဲ့သံမည်မျှအချိန်အပါအဝင်, သူတို့ရဲ့ proclivity သိရှိနိုင်ရန်မှအချို့သောတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖော်ရွေအမူအရာများအပြင်၌, ကုသယောက်ျားလည်းထိုကဲ့သို့သော "Non-အဆက်အသွယ်စိုက်ထူ" နှင့်အမျှအချို့ပိုပြီး sexy အချက်ပြမှုများ, ပြသထားသော "အမျိုးသမီးကဲ့သို့မြှူဆွယ်တောင်းခံ။ "
အံ့သြစရာကဟော်မုန်းနှင့်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသာမကဘဲကြွက်များ၏ ဦး နှောက်၏ဇီဝကမ္မဗေဒကိုလည်းပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ hypothalamus ဒေသသည် medial preoptic area (SDN-POA) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphic နျူကလိယသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကြာမြင့်စွာကတည်းကထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်ထိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်အားလုံးအတွက်၊ ၎င်းသည် SIDN အထီးသည်အမျိုးသမီးများထက် ၅-၇ ဆပိုကြီးသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များပထမနေ့ရက်များအတွင်း testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယူဆကြသည်။ စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်း Oxytocin နှင့်ကုသသောကြွက်များသည်သူတို့၏ SDN ကျုံ့သွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အားလုံးသို့သော်ဤမျှရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ Sdn oxytocin မှထိတွေ့မှုနှင့်အတူကျုံ့လုပ်ခဲ့တယ်နေတုန်း, ကမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် preference ကို၏ဖြစ်ပျက်နှင့်ဒါ Sdn ၏အရွယ်အစားဟာလိင်တူချင်းမိတ်ဖက်အကွံကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ ဤသည်ကတခြားလေ့လာမှုတွေဆန့်ကျင်တတ်, အရာတစျခု အဆိုပါ Sdn ၏အရွယ်အစားအထီးသိုးနှင့်လိင်တူဆက်ဆံအပြုအမူဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်အကြောင်းတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုဆက်စပ်သောနိုင်အကြံပြုသည်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေ့မထားပါနဲ့။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲခေါ်သွင်းပြီး oxytocin နဲ့ quinpirole ကိုတိုက်ကျွေးခြင်းကသူတို့ကိုလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လေ့လာချက်အရလိင်ကွဲလိင်ကွဲကြောင်ကြောင်ကြောင်များဟာလိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှီသဟဲပြုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။